News - Faa'iidooyinka dalabka tikniyoolajiyadda goynta leysarka
Faa'iidooyinka codsiga ee tiknoolajiyada goynta laser
Tiknoolajiyada goynta laser waa tiknoolajiyad sare oo tiknoolaji ah, oo isku dhafan indhaha, qalabka sayniska iyo injineernimada, soo saarista makiinadaha, tikniyoolajiyadda kumbuyuutareedka iyo teknolojiyada elektarooniga ah iyo qeybaha kale, xilligan, waa barta ugu kulul ee laga wada hadlayo cilmiga sayniska & tignoolajiyada iyo warshadaha wareegyada, gudaha iyo dibaddaba. In ka badan 50 sano, farsamaynta leysarka iyo codsi si dhaqso leh ayey u kobcineysaa, oo ay weheliso noocyo badan oo farsamooyin ah dhowr arji oo la xareeyay, iyo tikniyoolajiyadaha farsamaynta ugu weyn ee laser-ka waxaa ka mid ah: goynta laser-ka, alxanka laser, calaamadeynta laser, qodista laser, daaweynta kuleylka laser, laser nooc dhakhso leh, leysarka la mariyo iwm.
Teknolojiyada goynta laser-ka ayaa ah codsiga ugu weyn ee tikniyoolajiyadda leysarka ee warshadaha. Waxay xoojisaa isbeddelka warshadaha wax soo saarka dhaqameed waxayna siisaa habab cusub oo warshadeynta casriga ah. Waxay noqotay habka ugu badan ee loo adeegsado habka waxsoosaarka laysarka ee waxsoosaarka warshadaha. Waqtigan xaadirka ah, tikniyoolajiyadda goynta leysarka ayaa si ballaaran loogu adeegsaday soo saarista mashiinnada, dhismaha buundooyinka, soo saaridda birta, maraakiibta iyo soo saarista baabuurta, warshadaha korantada iyo korantada, duulista iyo hawada iyo warshadaha tiirarka dhaqaale ee qaran. Iyadoo horumarka joogtada ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo codsiga, tikniyoolajiyadda goynta laser ayaa dhab ahaan u sii socon doonta aagagga kale.
Sanadihii la soo dhaafay, farsamada farsamaynta leysarka ayaa si xawli leh u soo koraysa. Codsigeedu wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u ballaaran. markaa leysarka waxaa loo yaqaana "qalab wax soo saar caalami ah" iyo "nidaamka wax soo saar ee mustaqbalka wax soo saar wadaaga macnahiisu waa". Tiknoolajiyada wax soo saarka ee wadamada warshadaha horumarsan waxay sameyneysaa isbadal tayo leh sababtoo ah adeegsiga balaaran ee tikniyoolajiyadda farsameynta leysarka. Teknolojiyada goynta laser-ka ayaa ah dalabka ugu weyn ee tikniyoolajiyadda leysarka ee warshadaha. Waxay dardargelisay isbeddelka warshadaha wax soo saarka dhaqameed waxayna soo bandhigtay habab cusub oo warshadeynta casriga ah. Waxay noqotay habka ugu ballaadhan ee loo adeegsado habka waxsoosaarka laysarka ee waxsoosaarka warshadaha, kaas oo hanan kara dhammaan warshadaha wax lagu farsameeyo ee laser-ka in ka badan 70%.
Goynta laser-ka waa isticmaalka cufnaanta xoogga sare ee xoogga sare ee diiradda saara shucaaca shaqada. Hoosudhaca xad dhaafka marinka leysarka ee cufnaanta awoodda leysarka, tamarta beerka leysarka iyo gaaska firfircoon ee caawinaya goynta habka ku lifaaqan kuleylka falgalka kiimikada dhammaantood waxaa nuugaya maaddada. Heerkulka barta waxqabadka laser-ka ayaa si aad ah kor ugu kacaya ka dib marka la karkariyo barta la gaaro, maaddadu waxay bilaabaysaa inay uumi baxdo oo samaysato daloolka. Dhaqdhaqaaqa qaraabada ee laydhka iyo shaqada, sheyga ayaa ugu dambeyntii loo sameeyay jajab. Laamiga ku yaal jeex jeexa waxaa afuufa gaas cayiman oo cayiman.
Goynta laser-ku wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah sida kala-goynta ballaaran, xawaaraha jarista, jeexitaanka cidhiidhiga ah, tayada goynta wanaagsan, aagga kuleylka yar yar, oo lagu daray dabacsanaanta iyo wixii la mid ah. Faa'iidooyinkaani waxay ahaayeen dalabyo aad u ballaaran oo warshadaha casriga ah. Tiknoolajiyada goynta laser-ka ayaa sidoo kale noqotay mid ka mid ah teknoolojiyadaha qaangaarka ah ee tikniyoolajiyadda farsamaynta laser-ka Marka la barbar dhigo nalalka kale, halkan waxaa ku yaal qaababka soo socda:
1. Iftiin sare
2. Jihayn sare
3. Halbeegga sare
4. Isku xirnaansho sare
Sidoo kale afartaan astaamood awgood, si ballaadhan ayaa loo isticmaalay, waxayna keeneen astaamo qiimo leh oo loogu talagalay soosaarka soo socda ee soo socda ee habka laser-ka:
(1) Maaddaama aysan jirin wax xiriir xiriir ah, iyo tamarta laydhka iyo xawaaraha dhaqdhaqaaqa waa la hagaajin karaa. Marka waad ku guuleysan kartaa farsamooyin kala duwan.
(2) Waxaa loo isticmaali karaa in lagu farsameeyo noocyo kala duwan oo bir ah, oo aan bir ahayn. Gaar ahaan, waxaa lagu shaqeyn karaa adkaanta sare, jilicsanaanta sare iyo barta dhalaalaysa sare ee maaddada.
(3) Ma jiro "qalab" xirmo inta lagu guda jiro ka shaqeynta leysarka, iyo "xoog goyn" oo ku shaqeynaya qalabka shaqada.
(4) Falanqaynta laser-ka ee aagga kuleylka shaqaaluhu saameynayo waa yar yahay, cillad yar oo ka jirta shaqada, dabagal xoogaa yar oo farsameyn ah.
(5) laser-ka ayaa ku shaqeyn kara qeybta shaqada ee weelka xiran iyadoo loo marayo qalabka hufan.
(6) laser-ka waa fududahay in la hago. waxaa lagu gaari karaa jihada isbeddelka iyada oo diirada la saarayo. Way fududahay in lala shaqeeyo nidaamka CNC ee loogu talagalay ka shaqeynta qaybaha adag. Sidaa darteed, goynta leysku waa hab goyn aad u jilicsan.
(7) Falanqaynta laser-ka ayaa leh wax-soo-saar sare oo wax soo saar leh. Tayada wax-qabadku waa mid deggan oo la isku halleyn karo, faa'iidooyin dhaqaale iyo bulsho oo muhiim ah.